WARBIXIN: Sidee u dhismayaa Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed? – Puntlandtimes
Hindise sharciyeedka saxaafaddu waxa uu kamid yahay xeerarka ugu waqtiga dheer hayeeshee aan weli saldhigan, waxa uu soo billowday mashruuca xeerkani sanadkii 2007, hadda waxa uu kamid yahay hindise-sharciyeedyada horyaal Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya isaga oo ay tahay in uu maro hannaanka aqrisyada, doodaha iyo ansixinta.
Xildhibaan Khaalid Macow guddoomiyaha guddiga saxaafadda iyo ururada warbaahintu dhowr mar ayay kawada doodeen xeerkan iyo habka ugu fiican ee uu u tegi kara heerka Baarlamaanka iyada oo Ururada warbaahinta iyo dhammaan dhinacyada uu quseeyo ay isku waafaqsan yihiin in xeerka saxaafaddu u adeegayo horumarinta iyo dhowridda Saxaafadda.
Haddaba waxa jirta welina taagan dood muddo dheer oo salka kuhaysa sida uu u dhismayo Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed (Somalia Media Commission), oo lagu dhisayo xeerka saxaafadda?
Qodobka 14aad ee xeerka saxaafadda Soomaaliya oo uu meelmariyey Baarlamaankii 9aad waxa uu qabay in qaabdhismeedka Guddiga Warbaahinta Soomaaliyeed uu noqdo sidan:
Qodobka 14aad Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed
Ttirada Guddigu waxay noqonaysaa 09 (Sagaal) Xubnood oo ka kala imaanaya: B) Warbaahinta Dawladda, 3 xubnood; T) Warbaahinta gaarka ah 3 xubnood; iyo J) Ururrada bulshada rayidka ah …….. 3 xubnood oo ka kala imaanaya: Xuquuqul Insaanka, Haweenka iyo Qareennada Soomaaliyeed. 2.
14.5-Xubin kasta oo guddiga ka mid ah waxay xilkeeda ku waayeeysaa sida soo socota:- B- Geeri ama arrin kasta oo si lama fillaan ah ugu timaadda xubinta keentana iney xilkeeda gudan weydo; T- Xilka oo xubintu iska casisho; J- Waqtiga xilka oo ka dhammaada; iyo X- Xukun Maxkamdeed oo ku dhaca xubin kasta oo guddiga ka mid ah. 14.6- Soo buuxinta booska bannaanaada waxaa loo marayaa sidii markii hore lagu soo xulay.
Qodobkaas waxa kataagnayd dood weyn hayeeshee hadda sida muuqata qodobkaasi si kale ayaa loo rogay iyada oo ay suuragal tahay in aan warbaahinta madaxa bannaan wax badan ka ogeyn, soo jeedinta cusub ee qodobka 14aad ee xeerka saxaafadda oo kusaabsan dhismaha Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed ayaa u dhigan sidan:-
Qodobka 14aad :Guddiga Warbaahinta Soomaaliyeed
14.1- Xeerkan waxaa lagu dhisay guddi madaxbanaan, oo lagu magacaabo Guddiga Warbaahinta Soomaaliyeed (Somalia Media Commission).
14.2- Guddiga Warbaahinta Soomaliyeed waxaa xubin ka noqon kara aqoonyahan iyo xeeldheereyaal lagu xulay waayo-aragnimo, karti, daacadnimo iyo hufnaan.
14.3- Guddiga Warbaahinta Soomaliyeed wuxuu noqonayaa 9 (Sagaal Xubnood) oo ka kala imaanaya:-
B) 2 xubnood oo laga soo magacaabayo Wasaaradda Warfaafinta.
T) 7 xubnood, oo hal xubin maamul goboleedkiiba soo magacaabo. Iyo Gobolka Banaadir
14.4- Guddiga Qaran ee Warbaahintu, si uu xilkiisa u guto, wuxuu ka madaxbanaan yahay:-
B) Siyaasad iyo faro-gelin dawladeed.
T) Danaha hey’adaha iyo kooxaha gaarka
J) Danaha isdiiddan (Conflict of interests) ee qofka xubinta ka noqonaya iyo shaqada Guddigan.
14.5- Dhismaha Guddiga Warbahinta Soomaaliyeed waxaa loo marayaa wada-tashi.
Waa maxay dhibaatada Jirta?
Haddii ay dhacdo in 9-ka xubnood ee Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed ay kuyimaadaan sida ay qabto soo jeedinta cusub ee farqadda 14.3 waxa ay kadhigan tahay in dhammaan xubnaha Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed ay dowladdu soo magacaabeyso! Taasina waxa ay kasoo horjeeddaa ama kahor imaaneysaa soo jeedinta cusub ee farqadda 14.4 oo qabta sidan
Haddaba aniga oo xushmeyna guddiga saxaafadda ee golaha shacabka ogna dadaalka iyo dulqaadka guddoomiyaha guddiga Prof: Xil. Khaalid Macow waxa aan soo jeediniyaa
In inta xeerku uusan gelin aqrinta iyo doodaha Baarlamaanka in guddigu arko cilladda dhinaca qaanuunka ah ee xeerka haysata si gaar ahaaneed isburinta qodobka 14aad
In guddigu u ogolaada daneeyeyaasha xeerkan sida Ururada Warbaahinta, Xarumaha saxaafadda, Bulshada rayidka iyo Hay’adaha qareenada iyo xuquuq aadanaha fursad kamadambeys ah oo ay si buuxda uga doodaan xeerkan iyo wax kabeddelkiisa.
Hadii ay suuragal tahay in xeerkani yeesho dhegeysi dadweyne, si ugu yaraan ay u soo dhammaadaan doodaha iyo jiitanka dheer ee xeerkan.